Iphupha malunga neHenna Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
IHenna yayisele isaziwa phakathi kwamaGrike amandulo. Benze ioyile ngeentyatyambo zale shrub, ebinevumba elimnandi kakhulu.
Kwakhona, ungenza umgubo kumagqabi e-henna bush. Kwicandelo lethu lehlabathi, le dayi isetyenziselwa ikakhulu ukwenza imibala kwizinwele. E-Indiya, i-henna isetyenziselwa ikakhulu ukupeyinta umzimba, i-mehndi okanye i-mehendi. Apha, ngaphezu kwako konke, izandla kunye neenyawo okanye iinyawo zipeyintwe ngobugcisa.
Imibala enokufezekiswa ngokusebenzisa i-henna eluswini nasezinweleni inokuba phakathi kweorenji ekhanyayo nebomvu bumdaka ngombala.
Makhe siqale sijonge la maphupha avela rhoqo kunomyinge ngokunxulumene nesityalo okanye umbala we-henna:
1 Uphawu lwephupha «iHenna»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Kwisandla - amava e-henna ephupheni.
1.2 Ubusuku beHenna kwihlabathi lamaphupha. Ukutshata kungekudala!
1.3 I tattoo eyenziwe ngepeyinti ye-henna-ukutolika kwamaphupha
2 Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iHenna»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Kwisandla - amava e-henna ephupheni.
Ngaba ukhe waphupha ngesandla sihonjiswe ngombala obomvu-omdaka we-henna? Imifanekiso enjalo ye-henna esandleni, ekhangeleka njengee-tatoo, zibonisa isigaba sokonwaba kunye nobuchule bobomi bamaphupha. Izicwangciso zekamva eliqulunqwayo ngoku kunokwenzeka ukuba zithweswe ngempumelelo.
Ubusuku beHenna kwihlabathi lamaphupha. Ukutshata kungekudala!
KumaSilamsi amaninzi, ubusuku obungaphambi komtshato ngokwesiko babhiyozelwa ngobusuku behena. Umbala obomvu, ukuzila kunye nesigqubuthelo kudlala indima yomfuziselo. Ngaba uyibonile le mifanekiso iphupha? Ubusuku beHenna ephupheni bubonisa ukuba umntu ulangazelela izithethe zamandulo. Oku kunokuba yimibala yenkolo, umzekelo, ukuba uziva ukuba ungowamaSilamsi okanye uqhelene.
I tattoo eyenziwe ngepeyinti ye-henna-ukutolika kwamaphupha
Ngokubanzi, umvambo eluswini, owawuzotywe ngoncedo lwe-henna, ubhekisa kuyo (imfihlo?) Umnqweno womntu ophuphayo ukutsala umdla ngakumbi. I tattoo engaqhelekanga, njengamaphupha. Kodwa lo mntu kuthethwa ngaye uhlala evakalelwa njengomhlambi weegusha awurhaxayo. Zahlule kwaye uphakamise ubuntu bakho, yiyo loo nto injongo yakho ifuna.
Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuchazwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika umfanekiso wephupha "i-henna" efana ne tattoo kwiphupha. Ke ngoko, iphupha le-henna linokutsala umdla wabo baphuphayo kwinto yokuba kwelinye icala, unqwenela ukutsala umdla ngakumbi ebomini bokuvuka. Kwelinye icala, ungawufihla umnqweno wokuba kude kwabanye okwethutyana. ukunciphisaukuze ukwazi ukuphucula ubuntu bakho.
Ukuba umntu wenza imibala ye-henna ephupheni, ukulangazelela kwakhe umntu unokukwenza. utshintsho nokuba olu tshintsho alunakuhlala ixesha elide. Ukuba ulusu lwakho lupeyintwe nge-henna ephupheni, ungahlala ujonge kumzuzu owonwabileyo kunye nempumelelo el mundo yomlindo.
Ukuba umntu ophuphayo ephupheni lakhe ubona isithethe okanye isithethe apho abafazi bomfazi behombisa ngobuchule izandla neenyawo ngehena ngaphambi komtshato okanye umtshato, oku kunokuthathwa njenge uphawu oluhle itolikwe. Unokulindela ulonwabo eluthandweni, kunye nempumelelo kunye nokuchuma.
Ukuba une tattoo ye-henna ebusweni bakho ephupheni lakho, uya kufuna ngokubanzi ukujonga ngaphandle iipropati ibonisa ukuba zeziphi onokuthi ungabinazo. Umnqweno wokuba ngaphezulu koko unguye ungabonakaliswa kuye. Ukuba ubona iinkwenkwezi ezinemihombiso ye-henna ngelixa ulele, uhlala ufumana isilumkiso sokwazisa ngendima yakho ebomini.
Ukuba umntu oleleyo usabela kwi-henna ephupheni ene-aleji, mhlawumbi ngokurhawuzelela nokwanda kokukhuhla, kukho into enokumlungela. Ukungakhululeki ngaphambili. Oku kuyakucaphukisa kwaye kukugcine uxakekile ixesha elide.
Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, i-henna iqulethe umkhondo kulowo uleleyo njengephupha. Kuya kufuneka uqhubeke nobobuqu bakho ngakumbi iimvakalelo dibana ne. Zingaba ziimvakalelo ezilungileyo nezingalunganga okanye iinkumbulo.
Ukuba i-henna ibonakala ephupheni emthunzini weorenji, oku kungabonisa amandla amakhulu kwaye Yonwabela ubomi bhekisa. Njengophawu lokulala, umbala obomvu-obomdaka we-henna unokuhlala ubonakalisa inkanuko yenyama yalowo uleleyo.
Ukuba upeyinta ngehena kulusu lwakho ephupheni ngoncedo lwe-stencil okanye ibrashi, ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha, nguwe uqobo. iimfuno zesondo Ngokuqonda kwaye oku unokukuchaza ngendlela efanelekileyo.
Kule meko, ipatheni esetyenzisiweyo inokubaluleka ekutolikeni. Imihombiso yeHenna inokubhekisa ikakhulu kubuchule bokulala. Ngokunokwenzeka kuya kufuneka unike eli thuba ebomini bakho. I-mandala eyenziwe nge-henna inokuhlala isetyenziswa ephupheni. ingqalelo Buza izinto ezibalulekileyo. Oku kunokufuna uhlengahlengiso lokuqonda kwengqondo.
Uphawu lwephupha «iHenna» - ukutolika kokomoya
Ukubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "ihena" lunokubonisa umnqweno wamaphupha wokuba yinxalenye yenyaniso. Yoluntu yiba yiyo.